Asa eny anivon’ny orinasa Ho vitan’ny solosaina misaina ny 30% amin’ny taona 2023
Tsy mitsaha-mivoatra ny teknolojia maneran-tany. Tafiditra ao anatin’izany isika eto Madagasikara.
Amin’ny taona 2023 mantsy raha araka ny fanazavan-dRakotondrahaja talen’ny ivontoerana “Arkeup academy” aty amin’ny ranomasim-be Indiana dia ho vitan’ny solosaina misaina na ilay antsoina hoe : “intelligence artificielle” ny 30 %-n’ny asa eny anivon’ny orinasa. Anisan’izany ny fandraisana ny antson’ireo mpanjifa amin’ny alalan’ny antso an-tariby, ny famaliana ny mailaka, ny fanamboarana faktiora sy ny famaliana izany izay mbola betsaka ireo orinasa no tsy mahalala.Tsy midika anefa izany fa tsy ilaina ny olona fa hanampy azy ireny aza ny solosaina mba hanamaivanana ny asany. Notanterahina teny amin’ny Etech Madagascar eny Ambohimanarina omaly ilay kaonferansa iraisam-pirenena momba ity solosaina misaina ity. Ankoatra ireo sekoly ambony maro izay tonga nandray anjara dia tazana teny an-toerana ihany koa ireo manampahaizana avy amin’ny google, Atoa Marc Rakotomalala, izay nianatra manokana ny intelligence artificielle ary efa niofana tany Etazonia…Tanjona amin’izao kaonferansa izao ny hanampiana ny orinasa hirotsaka an-tsehatra amin’ny fampiasana ny teknolojia avo lenta hiarovana ny tombontsoa mety ho azon’izy ireo tsy ho very.